မင္းသား မင္းသမီးေတြ အခ်စ္ခန္းရိုက္ၿပီးရင္ အိမ္မျပန္ရဟု က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးေျပာ . . . - Myitter
မင္းသား မင္းသမီးေတြ အခ်စ္ခန္းရိုက္ၿပီးရင္ အိမ္မျပန္ရဟု က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးေျပာ . . .
July 28, 2020 Myitter Uncategorized 0
ဒီနေ့အစည်းအဝေးမှာ ပြောသွားတာပါ။ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရာမှာ တစ်ယောက် နဲ့ တစ်ယောက် Social Distancingတွေနဲ့ ရိုက်ကူးဖို့ ခွင့်ပြုထားတာကြောင့် Love Scene တွေရိုက်ဖို့ အခက်တွေ့နေတဲ့ ပြဿနာကို ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာမြင့်ထွေးက ဖြေရှင်းပေးခဲ့တာပါ။
Covid ကြောင့် ရပ်နားခဲ့ရတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား၊ ဗီဒီယို ဇာတ်ကားနဲ့ ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ တွေကို စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနဲ့အညီ ပြန်လည် ရိုက်ကူးခွင့်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်ပေမယ့် ရိုက်ကွင်းတွေမှာ အချစ်ခန်းရိုက်ရမယ့် မင်းသား၊မင်းသမီးတွေကိုတော့ အချစ်ခန်းရိုက်ပြီးရင် အိမ်မပြန် ရဘူးလို့ ဒီနေ့ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ပြုလုပ်တဲ့အွန်လိုင်း ဆွေးနွေးပွဲမှာ ကျန်းမာရေး နဲ့ အားကစားဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးက ပြောသွားခဲ့တာပါ။
“ Love Sceneတွေ ရိုက်လို့ရပါတယ်။ ရုပ်ရှင်မင်းသားနဲ့ မင်းသမီး ကို ငါးရက် ခေါ်ထားပြီး ကွာရန်တင်း လုပ်ပါ။ ငါးရက်ပြီးရင် Swab ယူပါ ပြီးတဲ့အထိ ဆက်တိုက်ရိုက်သွားလို့ပါတယ်။ စိတ်ချလက်ချ ရိုက်လို့ရပါတယ်။
သူတို့နှစ်ယောက်ကို ငါးရက်ခေါ်ထားရမယ်ပြီးရင် Swab ယူမယ် Negative ဆိုရင် အဲ့နှစ်ယောက်သည်ဘာလုပ်လုပ် လို့ရသွားပြီ။
သူတို့ကို ရိုက်တဲ့ရိုက်ကွင်းကတော့ ၆ပေလောက်က ကိစ္စမရှိပေမယ့် တကယ့်အနီးကပ်ရိုက်တဲ့သူတွေ စိတ်ချလက်ချ ရိုက်လို့ရပါပြီ။ သူတို့ကို အပြီးထိ တစ်ခါတည်း ရိုက်လိုက်ပါ။ အိမ်တော့ပြန်လွှတ်လို့ မရဘူးပေ့ါ” လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
Covid ကြောင့် အနုပညာလုပ်ငန်းတွေ ကို ၂၀၂၀ ခုနှစ် မတ်လ အစပိုင်းမှာကတည်းက ရပ်နားခဲ့ရတာ ဖြစ်ပြီး (၄) လအကြာမှာ အနုပညာလောကသားတွေအနေနဲ့ အလုပ်တွေ ပြန်လည်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
အနုပညာလောကသားတွေအနေနဲ့ ဇာတ်ကားရိုက်ကူးဖို့ ပြင်ဆင်ရာမှာ ကျန်းမာရေးပိုင်းဆိုင်ရာကို လုံခြုံ၊ စိတ်ချဘေးကင်း မှုဖြစ်စေရန်အတွက် လိုအပ်သလို စစ်ဆေးနိုင်ဖို့ ဇာတ်ကား အမည်၊ တစ်ရက်အတွင်းဇာတ်ကား ရိုက်ကူးမည့်ရိုက်ကွင်းနေရာများ၊ ရိုက်ကူးသွားမည့် အချိန် တို့အပြင် ဇာတ်ကားထဲမှာ ပါဝင်သွားမယ့် အနုပညာရှင် လူဦးရေ အတိအကျ တို့ကို အနည်းဆုံး အချိန် တစ်ပတ်ခန့်ယူပြီး ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပြည်သူ့ ဆက်ဆံရေး ဦးစီးဌာန၊ ရုပ်ရှင်မြှင့်တင်ရေး ဌာနခွဲသို့ တင်ပြလာဖို့လိုအပ်ကြောင်း ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာန ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ကြေညာချက်ထဲမှာ ပါရှိပါတယ်။
အခုတစ္ခါ အလွည့္က်လာတာေတာ့ စည္သူ၀င္းျဖစ္ပါတယ္….